FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA MPIANDRY ONDRY TATRA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika mpiandry ondry Tatra
Tatra olon-dehibe miaraka amin'ny alika kely, sary natolotry ny poloney Tatra Sheepdog Club
Tatra Sheepdog poloney
pol-ish tat-rah ondry-dawg
Ny palitao roa sosona dia mavesatra miaraka amin'ny palitao ambony izay sarotra tohina, mahitsy na somary miforitra. Ny akanjo ambany dia be sy matevina. Ny loko palitao dia fotsy madio, tsy misy marika marika. Ny orana dia manana orona mainty, molotra ary sarom-borosy. Maizina ny paty tongotra. Ity karazana ity dia mila tompona manan-tsaina, tsara kokoa noho ny traikefa alika lehibe taloha. Ny tompony dia tokony ho mpitondra alfa matanjaka, tsy miangatra, be fitiavana ary tena mifanaraka amin'ny lalàna rehetra.
Ny Tatra Sheepdog poloney dia ampiasaina amin'ny fiompiana, ary mpiambina ny andian'ny ondry aman'osy. Izy io koa dia azo tazonina ho mpiara-mitory sy mpiambina. Ity alika miasa voajanahary ity dia mahaleo tena, mieritreritra tena, manam-pahaizana ary mahay manombana toe-javatra tsy misy fitarihan'olombelona. Araraoty tsara izy ireo raha mbola tanora sy mandritra ny androm-piainany manontolo. Ilaina ny fankatoavana ifotony. Manolo-tena sy be fitiavana amin'ny fianakaviany sy ny sakaizany akaiky nefa matetika dia hotehirizina miaraka amin'ny olon-tsy fantatra. Ity mpiambina andian'ondry ity dia mirona amin'ny faritry ny trano sy ny manodidina azy ka ilaina ny fitarihana olombelona tsy miova. Hanome hodi-kazo fampitandremana lehibe izy ireo amin'izay heverina fa mampiahiahy na hafahafa ary hanaikitra amin'ny farany raha tojo fanamby na atosika. Raha avela any ivelany izy ireo dia hiambina sy hiambina mandritra ny alina, manao fisafoana ny trano. Izy ireo dia hitraka amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny toerana na tsy mahazatra. Tian'izy ireo ny lanezy sy ny hatsiaka, mahatohitra ny toetr'andro. Tsy masiaka alika izy ireo ary mirona amin'ny biby hafa tsy kaninina. Amin'ny ankapobeny dia malemy paika amin'ny ankizy tsara fitondran-tena sy tsara fitondran-tena.
Haavony: Vehivavy 24 - 26 santimetatra (60 - 65 cm) Lehilahy 26 - 28 santimetatra (65 - 70 cm)
Milanja 80 - 130 pounds (36 - 59 kg)
Olana amin'ny fototarazo sy ara-pahasalamana: tampoka ny valahana indraindray. Vitsy dia vitsy ny tranga voalaza (latsaky ny 1%) ny famonosana ara-nofo, ny aretin-jaza, ny androbe, ny dermatitis mahazaka ary ny fivontosana (torsion gastric).
Ireo alika ireo dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano ary hanao tsara indrindra amin'ny tokontany midadasika na lehibe. Mila toerana malalaka izy ireo, saingy mifanaraka tsara amin'ny fiainam-pianakaviana. Tsy tena mihetsika ao an-trano izy ireo fa mila manao fanatanjahan-tena matetika any ivelany. Ny fefy dia tsy maintsy ilaina satria mety hirenireny mitady ny sisin-tany amin'izay inoany ho faritaniny izy ireo. Mavitrika tokoa ny alika kely ary mety hanana fironana hirenireny na handositra. Aleo ny toetrandro mangatsiaka.
Mila entina a mandeha isan'andro . Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy asiana voditongotra eo anilany na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, satria ny voajanahary dia milaza amin'ny alika fa ny mpitarika no mitarika ny lalana, ary io mpitarika io dia tokony ho olombelona.
Ankizy 5-10 eo ho eo
Mandraraka ny palitaony amin'ny faramparan'ny lohataona ary tsy maintsy kosehina sy hokolokoloina. Ny sisa amin'ny taona dia mijanona ho madio noho ny palitao manadio tena. Mila fandroana ny irery. Volom-bava maina, ity karazany ity dia tsy milatsaka.
Ity karazany ity dia avy amin'ny tendrony Tatra Mountain amin'ny Carpathian Mountains any atsimon'i Polonina.
Herding, mpiambina andiany
PKC = Club Kennel Poloney
PTSCA = klioba Tatra Sheedog poloney any Amerika
Goliath nihantona teny ambonin'ny vatolampy, sary natolotr'i Poloney Tatra Sheepdog Club
Martin the Polish Tatra Sheepdog (Owczarek Podhalanski) 3 taona— 'Martin dia tsipika miasa amin'ny alika ary teraka tao amin'ny fiompiana ronono ao Lemont Illinois antsoina hoe Golden Whole. Miara-miasa amin'ny Tatras poloney 4 hafa izy ao amin'ny faritany coyote mavesatra any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny metro Chicagoland. '
Mpiandry ondry Tatra Sheepdog poloney.
Bulldog amerikana 8 herinandro
afangaro amin'ny lab makoleta amerikana bulldog
amerikana bulldog amerikana sy mix mix australianina
mampiseho ahy ny sarin 'ny pekingese alika
corgi border collie afangaro alika kely
fampifangaroana laboratoara bulldog anglisy taloha